Anodiwa Mhoroi mose
1 gore 7 ago #724 by Leocha1
Ini ndiri mutsva kuno uye ndakawana iyi webhupu nezuro.
Kwenguva yakareba chaizvo ini ndiri mudzidzi anozvikudza wechisa simulator 2004, uye achiri nezvakawanda zvokuwana.
Ndakaona iyi shandisi mushure mokunge ndaenda kune dzimwe ndege dzisina mahwanda.
Zvaishamisa zvandakawana pano.
Saka ndinoda kutaura kuti ndinotenda zvikuru nokuda kwehupamhi hwehupfumi hwezvinhu.
1 gore 7 ago #726 by Dariussssss
Imwe huru ndinokutendai nemashoko ose omutsa. Nzira yangu yekuuya pano yaiva yakafanana zvakafanana neyako. Ndiri paFSX iye zvino asi kwenguva yakareba kuenda, ndaivewo pane FS2004, izvo zvisiri zvakaipa zvachose.
Tichaita zvose zvatinogona kuti tigone kugara pano zvakanakisisa sezvinobvira.
Pane zvakare, ndinokutendai zvikuru uye munogamuchirwa.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Leocha1
1 gore 6 ago #741 by Apollo21
Ndinoda kutaura kuti kuvonga nokuda kwekuregererwa kwemashoko ose, iwe ndanga ndiri kushandisa nzvimbo yako kwemwedzi inoverengeka uye ndaifanira kunge ndakakutendai zvisati zvaitika asi izvo sezviri pakati pezvimwe zvinhu ndezvokuti kunyange paEbay kakawanda kutarisa ndege uye saizvozvo ndakasvika Kune mumwe munhu akatengesa (Freeware Aircraft) saka ndakamuvhura uye ndakabvunza kana vakanga vari zvechokwadi freeware nokuti ndaiva nemapurisa akafanana aaive achipa, uye vaishamisika kana vakanga vari chaiyo kana kuti payware iye akapindura uye vakati vaive vakasununguka vaiti aive Bundle re freeware mune rimwe pack. Iye zvino izvi hazviratidzika zvakanaka kwandiri, kubvisa vanhu vose vakagadzira uye vakaparadzira mapurisa.
Zvichida hazvisi zvebhizinesi rangu asi ini pachedu ndinofunga kuti hazvina kururama zvachose, ndinonzwa ndine chokwadi kuti zvisiri pamutemo zvichida ini handizivi ndinongoda kuchenesa vanhu pamusoro peiyo ndege yose pane disks inowanika kubva kuRioo kana vamwe Pane dzimwe nzvimbo dzekutsvaga.
Time chokusika peji: 0.268 mumasekonzi